ILANGA LETAROT: ITHETHA UKUTHINI? INGCACISO KUNYE NOKUNYE
Ukuba ufuna ukufunda malunga ilanga I-tarot, emva koko uze kwindawo elungileyo, kuba kweli nqaku linomdla siza kuthetha ngale khadi inomdla, intsingiselo yayo, inkcazo, ukutolika nokunye okuninzi. Uya kumangaliswa kakhulu!
1 Ilothe yelanga
3.1 Ilatot yelanga iMarseille
3.2 Ilanga iJodorowsky tarot
Ilanga le-tarot; Elinye lamakhadi anamandla kwaye anamandla, imele inkosi yeenkwenkwezi. Yeyona arcana intle kakhulu, kuba ibonisa ulonwabo, impumelelo, ukuvisisana, ulungelelwano, uxolo, ubuhlobo, uxolelwaniso nokunye okuninzi.
Ileta elungileyo kakhulu kuye wonke umntu, ivelisa uxolo kunye nokuzithemba. Ukuba sineprojekthi, ubudlelwane obutsha okanye ubuhlobo, oko kuthetha ukuba yonke into izakuhamba kakuhle kakhulu. Inentsingiselo enomdla kwaye siya kukucacisela apha ngezantsi.
Ilanga le-tarot, kwi-numerology, lithwala inani le-19, elinxulunyaniswa nokukhanya kokomoya kwaye lizalisa umphefumlo ngoxolo. I-Esoterically, kwi-astrology, inxulunyaniswa nomqondiso we-zodiac Gemini, amawele angenakuhlukaniswa, onxibelelwano kunye novuyo.
Inxulunyaniswe nomlilo, enye yezinto ezine ezidale yonke into esiyaziyo namhlanje, icoca zonke vibes ezimbi, zonke iingcinga ezimbi, icoca umphefumlo kwaye ivelise uxolo, ilungele ukuzazi kunye nokubonakalisa.
I-Kabbalistics idibanisa eli khadi kunye nelanga, kuba, kwi-archetype yayo yoqobo, unokubona umntwana eyamkela imitha yelanga, ekhanyisa indawo yonke.
Lo mntwana ufuzisela ubumsulwa, ubuntwana, uvuyo. Imele ubukho bethu bangaphakathi xa buseluxolweni ngokupheleleyo. Kwaye ihashe elimhlophe, akhwele kulo, linxulunyaniswa nobume bakhe obunyulu kunye namandla omoya, akalilawuli ihashe ngezandla zakhe, ezibonisa ukuba unolawulo olufike ngexesha elifanelekileyo lokuqonda kunye nokuqonda.
Ilanga libonisa ukuba kukho ithemba, amandla amnandi, amandla akhuthazayo, ulonwabo, ukhuseleko kwindlela ekhanyayo. Imitha yelanga ekhanyisa indawo yonke ibonisa ukuba amanyathelo esifuna ukuwathatha aya kuzinza kwaye acace.
Masikhumbule ukuba ilanga lithetha ubomi namandla, ke siya kukhuseleka phantsi kwale arcanum enamandla, ekhusela indlela yethu kwaye isinike ithuba lokufikelela kuzo zonke iinjongo zethu ngeenyawo zasekunene, ukufikelela impumelelo.
Incinci iphambi kodonga lwamatye olubonisa ukwakhiwa kwekamva lethu, isitena ngasinye esinokuqwalaselwa ziinjongo zethu, iminqweno yethu izalisekisiwe.
Ilanga le-tarot ngokungathandabuzekiyo lifanekisela umanyano, ulonwabo, imvisiswano, ulungelelwano kunye nokuchuma. Kuxhomekeke kwisikhundla okuso ngexa lohlu, ukutolika kwakho kuyahluka, kodwa kubalulekile ukuba uqaphele ukuba eli khadi lilungile kwaye ligcwele imiqondiso elungileyo.
Ukuba ibonakala ikwimo yayo elungileyo, ibonisa ukuba ixesha lokuhlaziya sele liza kuqala, ekuqaleni, uyakuziva unesidingo sokucingisisa ngezinto ofuna ukuzenza, uya kufuna ukucwangcisa ikamva elingcono kwaye ngaloo ndlela liyakuba njalo, uya kuba nempumelelo.
Amandla akho aya kuba yinguqu kangangokuba nabanye abantu bazakuwuva, kwaye banokufuna nokutshintsha ubomi babo, baziva bekhuthazwa kukukhanya okukuko. Le arcanum yomelele kwaye inomdla.
Ukuba kubonakala xa ufuna ukwazi ukuba indlela oza kuyithatha ilungile na, ke unokuqiniseka ukuba iyakuba njalo, kwaye uya kuyiphumelela impumelelo oyifunayo.
Ukuba ibonakala xa usiva ungquzulwano, oko kuthetha ukuba uya kuba nakho ukufumana isisombululo kule ngxaki kwaye uya kuxolela, kuba le arcanum iyahambelana nobunyulu, kunye nokuqala kwakhona kwayo yonke into kwaye iyawucoca umphefumlo.
Ndiseluthandweni; ibonisa uzinzo, umanyano kunye namaxesha azolileyo. Ngempilo, amaxesha amnandi okuzikhathalela, ukonwabela ngaphandle nangabantu obathandayo.
Ukuba ikhadi libonakala liguqulwe, libonisa ukuba lixesha lokuba nobulumko, ayisiyonto imbi. Umonde uyafuneka kuphela kuba kuyakubakho amaxesha okuphumla, uxinzelelo kunye nobunzima ekufezekiseni impumelelo.
Ukucwangciswa okuhle nonxibelelwano kubalulekile kula maxesha ukunqanda ukungaqondani, kodwa ngokubanzi, kubalulekile ukuma uqinile kula maxesha kwaye ungazivumeli uwele kwaye uthathwe luxinzelelo, unxunguphalo kunye neemvakalelo ezingalunganga.
Ukuba ufuna ukuqhubeka nokufunda malunga Abathandi be-tarot, Cofa apha.
Ilatot yelanga iMarseille
En I-tarot yelanga iMarseille, sinokufumana ukutolikwa kwale arcana inkulu kwiiplanethi ezintathu, ezichazwe apha ngezantsi:
Inqwelomoya yokomoya: idibanisa amandla asemhlabeni kunye nawomoya, ukufezekisa ukudityaniswa phakathi kwezi zimbini apho zihamba zingena ngxaki.
Inqwelomoya (yomphefumlo): sifumana uxolo, ibhalansi, unxibelelwano nomntu esinguye ngaphakathi, uxolo olupheleleyo olusivumela ukuba sonwabe kwilizwi elibonakalisa ingqondo yethu.
Inqwelomoya: yenza ubuchule bube yinxalenye ebalulekileyo kuyo yonke, bakhe inqaba ebonelela ngokuchuma nokuzaliseka.
Xa silifumana eli khadi likwimo elungileyo, linokubonisa ukugqitywa kweeprojekthi, impumelelo, ukuzola kunye nozinzo phantse kuyo yonke indlela, ukwenza ngenkqubela phambili elungileyo.
Iqinisekisa ukuba abantu banokunxibelelana ngokuchanekileyo, kwaye basombulula nakuphi na ukungaqondani ngobuchule obukhulu. Inokuchazwa njengomanyano lobudlelwane, uzinzo ngokweemvakalelo, ikamva eliqinisekileyo.
Ishishini liza kuhamba kakuhle kakhulu kwaye uya kufezekisa iziphumo ezilungileyo ngexesha elifutshane kakhulu. Kwaye kwimpilo, isimangaliso esihle, uya konwaba ngamaxesha amnandi kunye namandla amakhulu.
Ukuba ibonakala iguqulwe, kusenokwenzeka ukuba uneengxaki kubudlelwane bakho okanye kubuhlobo bakho. Kwimpilo inokudinwa, kubalulekile ukuphumla. Emsebenzini, unxibelelwano kunye nokucwangciswa kubalulekile ngaphambi kokuba usebenze kwishishini.
Ilanga iJodorowsky tarot
Le arcana iphambili ithetha amandla ooyise, kuba uAlejandro Jodorowsky. Uyitolika njengotata wendalo osivumela ukuba siqiqe ngengqiqo, sithande ngendlela yobuzalwana, sabelane, sincede abanye.
Ngamandla anamandla, ayinyani, amandla aphezulu asiqhubela phambili ukuba abengcono, akhanyisela indlela esiza kudlula ngayo ngamaxesha ahlukeneyo obomi kwaye asincede siphumelele kwinto esiyicebisayo.
Ifezekisa uxolelwaniso phakathi kwabantu, ichukumisa ezona nzulu kwaye zingenatyala: umphefumlo. Sebenzisana ekucoceni, ekuhlanjululweni, ukuba yinto eyomeleleyo nenamandla, oko kuza kulungelelanisa yonke into eguqulweyo.
Akuthandabuzeki Ilanga iJodorowsky tarotLikhadi eliqinisekileyo neliguqulayo, kodwa likwangqongqo kakhulu xa libonakala liguquliwe, kuba lisikhokelela kubulumko kunye nokubonakalisa okungapheliyo.